Tsy nahatanty nisaraka Notetitetehany ilay olon-tiany
Vono olona feno habibiana no nitranga tany amin’ny kaominina ambanivohitra Sandrakatsy, distrikan’i Mananara Avaratra alakamisy 30 aprily lasa teo.
Tovovavy iray nandeha naka rano no notetitetehan’ny olon-tiany tamin’ny antsy ka namoy ny ainy tsy fidiny. Nanomboka tamin’ny fanalany ny hodi-dohany izany, niampita tany amin’ny hatony….Raha araka ny loharanom-baovao azo dia olana ara-pitiavana no niteraka ity vono olona ity. Nisaraka mantsy io tovovavy io sy ilay olon-tiany ary efa nozaraina ny entana nitambaran’izy ireo. Tsy nahazaka izany anefa ilay lehilahy fa narahiny tany am-pakana rano ilay tovovavy ary notaperiny ny ainy. Rehefa vitany izay nataony dia nihazakazaka tany an-tanana namonjy ny biraon’ny kaominina ity farany . Fotoana fohy taorian’izany dia tonga nanatona ny biraon’ny kaominina ihany koa ny havan’ilay tovovavy maty ka teo no nanoloran’ilay lehilahy tena mba hovonoina ihany koa amin’izay hono samy maty izy roa mpifankatia. Efa eo am-pelatanan’ireo tompon’andraikitra any an-toerana moa ny raharaha.